Ama-Forex Brokers Angcono Kakhulu 2022 kanye Nokushintshana Kwe-Cryptocurrency
I-Akhawunti Yedemo Yamahhala
Abathengi Abathenjwa Kakhulu
Abathengi abahamba phambili be-PAMM
izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu
Ukuhweba Kwesikhathi Esimisiwe
Ama-Scholarship amahle kakhulu ka-2022
Thenga i-BTC engaziwa
Inkomba Yokwesaba Nokuhaha
Ama-Wallet amahle kakhulu
I-Ethereum Wallet engcono kakhulu
I-Bitcoin Wallet engcono kakhulu
Ukushintshanisa okungcono kakhulu kwe- Litecoin Wallet
Thola umthengisi ongcono kakhulu wakho
Sizinikezele ekuletheni abathengisi ukubuyekezwa komthengisi okungachemile ukuze sibasize bathole abathengisi be-Forex abahamba phambili, izinketho kanambambili kanye nokuhwebelana kwe-cryptocurrency ngezidingo zabo zokuhweba ku-inthanethi.
Sinezibuyekezo eziningi ezijulile zomdayisi, izilinganiso kanye nethuluzi eliwusizo lokuqhathanisa ukusiza abathengisi bakhombe ngokushesha futhi kalula ama-broker angcono kakhulu ngezidingo zabo ngabanye.
*Imali yakho eyinhloko ingase ibe sengcupheni
Ukutshala imali kuzinketho ze-Forex, CFD kanye ne-FX kuhilela ubungozi obukhulu bokulahlekelwa futhi akubalungele bonke abatshalizimali.
Idiphozithi encane yokungena
Amathuluzi okufundisa amaningi
Buka Manje!Ukuhlolwa Kwezohwebo Kwe-OlimpikiBuka Manje!Ukuhlolwa Kwezohwebo Kwe-Olimpiki
Izimpahla ezingaphezu kwe-100 ezizohwetshwa
Inkundla yobuchwepheshe obuphezulu ewina imiklomelo
Buka Manje!Thola UkuhlolwaBuka Manje!Thola Ukuhlolwa
Ukukhetha okukhulu kwezinsimbi zokuhweba
Imiklomelo Ehlukahlukene Yamazwe Ngamazwe
Buka Manje!Ukuhlolwa kwe-AvaTradeBuka Manje!Ukuhlolwa kwe-AvaTrade
Bona wonke ama-broker
Ukubuyekezwa komthengisi wokuhweba
Ithimba lethu selifunde amakhulukhulu ama-broker futhi likulethela ulwazi olubaluleke kakhulu ekuhlaziyeni okuhlangene kodwa okunemininingwane ukuze likusize wenze isinqumo esinolwazi sokukhetha ama-broker okuhweba angcono kakhulu ngezidingo zakho ngazinye.
Umthengisi wokuhweba ungumxhumanisi ovumela amaklayenti ukuthi athenge futhi adayise amathuluzi okuhweba ngemali encane yekhomishini. Banikeza abathengisi nabatshalizimali ukufinyelela kumapulatifomu ukuze bakwazi ukuhweba ezimakethe ezahlukahlukene njenge-Forex, Amasheya, Izimpahla, Ama-cryptomanes, Ikusasa, Izinkomba, Izinsimbi, Amandla, Izinketho, Amabhondi, ama-ETF, ama-CFD, njll. ezinikezela ngenhlanganisela yamathuluzi ezezimali.
Ngokungeziwe ekunikezeni ama-akhawunti okuhweba nezinkundla, laba badayisi bavame ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokuthengisa, okuhlanganisa izinto zemfundo, amathuluzi okuhweba, ukuhlaziya imakethe, izinhlelo zokusebenza zokuhweba, izinkundla zokuhweba komphakathi, nokuningi.
Uhweba kanjani ku-inthanethi?
Ukuhweba nge-inthanethi kuhilela ukutshala imali emikhiqizweni yezezimali kusetshenziswa inkundla yokuhweba ehlinzekwe yifemu yabathengi ezohlinzeka ngezimakethe ezahlukene kanye nempahla.
Uma uhweba ku-inthanethi, uthenga (uhamba isikhathi eside) noma uthengisa (ushoda) amathuluzi ezezimali futhi uqagela ukuthi izintengo zizokhuphuka noma zehle yini ukuze uzame ukuzuza ngomnyakazo wemakethe. Umthengisi usebenza njengomxhumanisi phakathi komhwebi nezimakethe abahweba kuzo.
Ukuhweba nge-inthanethi kufinyeleleka kalula, noma ubani onoxhumano lwe-inthanethi angavula i-akhawunti ye-brokerage futhi ahwebe nge-inthanethi ngedeskithophu, iwebhu kanye nezinkundla zokuhweba zikagesi eziphathwayo.
Ilawulwa kanjani imakethe ye-Forex?
Imakethe ye-Forex ilawulwa ngumthetho emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Lokhu kuyadingeka ukuze kuncishiswe amathuba okukhwabanisa engxenyeni yomthengisi we-Forex kanye nokuvikela imali yabatshalizimali.
Ukuze ungene emakethe ye-interbank, umthengisi udinga kuphela ukubhalisa njengenhlangano ehlinzeka ngezinsizakalo zezezimali.
Okusho ukuthi, ukugunyazwa kwabathengisi be-Forex akuphoqelekile. Kodwa abadayisi abahlela ukusebenza ngokwethembeka babheka ukuthola ilayisense, ngoba inikeza abasebenzisi isiqinisekiso sokuthembeka nokuvikelwa.
Ngempela, ukuze uthole ilayisense, umthengisi kufanele agcwalise izimo ezimbalwa ezinzima: athole ukuqinisekiswa okufanele, ahlele isikhwama sesinxephezelo, agcine imibiko esobala, njll. Amalayisense omthengisi ahlukaniswe ngamaleveli ambalwa.
I-US Derivatives Exchange Commission (CFTC) kanye ne-US National Futures Association (NFA). Lezi yizinhlangano ezidinga kakhulu, zilawula ngokuqinile umsebenzi wabathengi bazo, ngakho-ke abathengisi abanamalayisense anjalo bathembeke kakhulu.
I-UK's Financial Regulatory Authority (FSA) kanye ne-Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Lapha, izidingo zokukhishwa kwelayisensi zilula kancane, kodwa ngokuvamile kunzima kakhulu ukuzithola.
I-Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) kanye neMalta Financial Services Authority (MFSA). Ukubika kulula futhi ukulawula konke kubuthaka kulezi zinhlangano. Kodwa-ke, amalayisense abo akhishwa kuphela kubathengi abathembekile.
Ikhomishini Yezinsizakalo Zezimali Yase-British Virgin Islands (FSC BVI) kanye neKhomishini Yezinsizakalo Zezezimali Zamazwe Ngamazwe Yase-Belize (IFSC). Lezi zinhlangano azidingi umthengisi ehhovisi lazo elimele, kodwa ziqhuba ukucwaninga kwamabhuku njalo.
Izinga lesihlanu nelesithupha
I-Seychelles Financial Services Authority (SFSA) kanye ne-Saint Vincent kanye ne-Grenadines Islands Financial Regulatory Authority (SVG FSA). Zifaka isistimu yokunikeza ilayisense eyenziwe lula kanye nezinga elincishisiwe lokulawula.
Lezi zilawuli zinikezwe njengesibonelo; empeleni, kukhona okuningi. Inketho engcono kakhulu ukukhetha umthengisi omisebenzi yakhe ilawulwa izinhlangano zesigaba 1 kuya kwezi-4; yibo abanokwethenjelwa kakhulu.
Kodwa kunemininingwane eyodwa ngaphezulu. Ezweni, umlawuli unamandla omthetho kuphela emingceleni yezwe lakhe. Lokhu kusho ukuthi uma, ngokwesibonelo, isakhamuzi se-European Union sisebenza e-EU, abalawuli be-EU kuphela abangabavikela.
Yini umthengisi othembekile?
Uma ukhetha umthengisi we-Forex, kubalulekile ukuthi ungabi yisisulu somkhohlisi, lokho okubizwa ngokuthi "isitolo sebhakede" noma inkampani "engenalo ikheli".
Ukukusiza ukuthi uthole umehluko phakathi komthengisi ongathembekile nothembekile, sihlonze izimpawu ezimbalwa zomdayisi ongathembekile kanye nomthengisi othembekile:
umthengisi othembekile abakhohlisi
Ulwazi mayelana nenkampani lubonisa zonke izinzuzo nezingozi; umthengisi usebenza nabaqalayo nabadayisi abanolwazi Ngincamela ukusebenza nabadayisi be-novice, izinto eziningi zokukhangisa zabaqalayo
Amakhomishini nokusabalala kukhonjiswe ngokucacile Amakhomishini afihliwe kanye nezinkokhelo
Akukho ukushelela noma ukungasebenzi kahle Izinkinga nge-scalping esebenzayo, ukubanda kweseva, ukushelela okuvamile
Isevisi yamakhasimende iyashesha, abaxhumanisi bafaneleke kahle Ukwesekwa kwamakhasimende kuthulile, akukho ukulungisa okusheshayo okungenzeka
Ukuhoxiswa kwezimali kwenziwa ngokushesha Impendulo yekhasimende ihlala inezinkinga ngokukhipha izimali
Inkampani enomlando omude, imali enkulu, ilayisense kanye nenani elikhulu lokubuyekezwa okuhle Inkampani isanda kwakhiwa, imvelaphi nosayizi wemali egunyaziwe akwaziwa, ilayisense ayikakashicilelwa, ukuphawula kwekhasimende kubi noma ukuphawula kuqondile kodwa kubhalwe sengathi “kuyikhophi yekhabhoni”
I-Avatrade Social Trading
I-AvaTrade iyingxenye yohlu lwethu lwezinkundla ezingcono kakhulu zokuhweba komphakathi njengoba ihlinzeka abathengisi izinkundla eziningi zokuhweba zomphakathi eziqondile nezingaqondile.
I-AvaTrade ibambisene nabanye abahlinzeki bezimpawu abahamba phambili emhlabeni ukuqinisekisa ukuthi abathengisi bangakwazi ukulandela abadayisi abahamba phambili noma ngabe bakuphi.
Baphinde banikele ngokuhweba okuziqondise ngokwakho ezisekelweni zokuhweba ezinembile ezinhlobonhlobo zamathuluzi okuhweba angaphezu kuka-250 okuhlanganisa i-forex, ama-CFD kanye ne-cryptocurrencies.
Amapulatifomu e-AvaTrade okuhweba komphakathi afaka:
I-Mirror Trader - Jabulela ukuhweba okwenziwa ngesandla, okuzenzakalelayo noma okuzenzakalelayo ngokulandela abahlinzeki bakho bezimpawu obancamelayo. Ungaphinda ukopishe amasu okuhweba e-algorithmic athuthukiswe abadayisi abanolwazi kanye nonjiniyela abahamba phambili.
I-ZuluTrade - Khetha enanini elikhulu labanikezeli bezimpawu, abakleliswe kusetshenziswa imingcele esebenzayo ehlukahlukene, kufaka phakathi ukwehla okuphezulu kanye nenzuzo eyisilinganiso.
I-AvaTrade ingelinye labathengi abakhulu be-inthanethi emhlabeni ngokwenani lokuhweba. Alawulwa ezindaweni eziyisi-6 ezihlaba umxhwele okuhlanganisa i-Europe, Australia kanye neNingizimu Afrika. Amalayisense ayo okulawula ahlanganisa amazwekazi angu-5. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ungenza ukuhweba okuphephile nokuvikelekile endaweni yokuhweba ephelele abayihlinzekayo.
I-AvaTrade inikeza izinhlobonhlobo zezinkundla zokuhwebelana kwezenhlalo ezihlukene kanye nezimali ezincintisanayo, ingqalasizinda yokuhweba ehamba phambili embonini nokusekelwa okuhle kakhulu kwamakhasimende.
Ngalezi zizathu nokunye, kalula baba izinkundla zethu ezihamba phambili zokuhweba komphakathi.
Amathuluzi okuhweba angaphezu kwama-250
Amathuluzi okuhweba mahhala nezinkomba
Umthethonqubo ezindaweni eziyisi-6
ukwesekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu
Idiphozithi encane engu-$100
Bonke Abahwebi Be-Forex Badinga Ukuhlola Izinto Ezilandelayo:
Amapharamitha okuhweba: Kufanele kube nenani elikhulu lezimpahla ongakhetha kuzo, ezinezinsuku eziningi zokuphelelwa yisikhathi ongakhetha kuzo. Okungenani kufanele kube nezisetshenziswa ezimbili ezihlukene ongakhetha kuzo, nakuba abathengisi abaningi benikela ngaphezu kwalokho.
Izilimi Zenkundla: Lokhu kuzoba okubaluleke kakhulu kunabanye kunabanye. Wonke amapulatifomu anikezwa ngesiNgisi, kodwa izinketho zolimi ezengeziwe zingahluka kakhulu. Qiniseka ukuthi 'iwebhusayithi' kanye nenkundla kunikezwa ngolimi lwakho lwendabuko.
Idiphozithi encane: yiziphi izindleko zokuqala ukuhweba? Abadayisi abakhokhi mali ngokuhweba ngakunye, ngakho-ke zonke izimali ezifakiwe zingasetshenziselwa ukuhweba. Idiphozithi encane emaphakathi iphakathi kwama-$10 nama-$300. Noma yiliphi inani elingaphezu kwalokhu libhekwa ngaphezu kwesilinganiso.
Izinketho Zebhange: Okwakho indlela yasebhange okuncanyelwayo kuyanikelwa? Lo mbuzo kufanele uphendulwe ekuqaleni kwenqubo yokuhlola, ngoba uma kungenjalo, kuzodingeka ufune omunye umthengisi.
Amabhonasi namaphromoshini: Amanani ebhonasi afika ku-100% anikezwa abanye abadayisi. Lezi zizofika nemibandela okumele kuhlangatshezwane nayo ngaphambi kokuhoxa. Noma kunjalo, amabhonasi nokunye ukukhushulwa kunganikeza imali ye-akhawunti umfutho omuhle.
Ukwesekwa kweklayenti: Umphathi we-akhawunti ozinikezele angase ahlinzekwe noma angahlinzeki, kodwa bonke abadayisi kufanele babe nokufinyelela ekusekelweni kwamakhasimende. Okucatshangelwayo kule ndawo kuhlanganisa izindlela zokuxhumana ezitholakalayo kanye namahora lapho usekelo lunikezwa khona.
izinqumo ze abadayisi etholakalayo izobandakanya kokubili izinkampani ezintsha nezisunguliwe. Eziningi zilawulwa, kanti ezinye azikwazi ngenxa yendawo yazo.
Kuyiqiniso elifakazelwe ukuthi labo abasebenza nomthengisi omkhulu bavame ukuzuza kakhulu futhi bahlangabezane nenani elincane lezinkinga.
Nakuba ungase ukujabulele ukuqalisa, ziningi izinzuzo zokuthatha isikhathi ukukhetha engcono. umthengisi ye Forex.
Iyini imakethe ye-Forex?
Lena imakethe yokushintshiselana kwamanye amazwe ehlanganisa ukusebenza kwezezimali kwawo wonke amabhange nezinhlangano zamazwe ngamazwe. Uhlelo lwezomnotho olukhulu kunawo wonke emhlabeni lutholakala kuwo wonke umuntu.
Ungaqala kanjani ukuhweba nge-Forex?
Njengoba umuntu engakwazi ukubamba iqhaza emakethe, umhwebi udinga ukubhalisa nomthengisi we-Forex. Umdayisi uhlinzeka umhwebi indawo yokuhweba, amathuluzi okuhweba nawo wonke amathuba okuhweba nge-Forex.
Ingabe zikhona izindlela zokungena ze-Forex ezingenayo?
Yebo. Umhwebi angatshala izimali ngengozi encane kuma-akhawunti e-PAMM/LAMM, aphethwe abadlali bemakethe abangochwepheshe. Kukhona ezinye izici ezifana nokuphathwa kokuthembana kanye nezinsizakalo zokuhweba zokukopisha.
Iphephe kangakanani imakethe ye-Forex?
Njengoba ukuhweba kwenziwa ngokohlobo lwe-margin, kuhlale kunengozi futhi ekuqaleni kuphezulu kakhulu. Kodwa abathengisi banikeza inani lamathuba asebenzayo okuhlukahluka kwengozi, isibonelo amaphothifoliyo e-PAMM. Futhi, izimali zesinxephezelo esiphuthumayo.
Kanambambili Izinketho Article
Thola izincwadi zezindaba
Abathengi abasohlwini lwewebhusayithi badlule ocwaningweni oluningi nokuhlaziya okujulile.
Inhloso yethu ukuhlinzeka ngokubuyekezwa okungachemile kubathengi abahweba nge-inthanethi ukuze banikeze abadayisi ukuqonda okucacile kwama-broker ahlukene atholakalayo. Abahwebi bangasebenzisa isevisi yethu yamahhala, kodwa kufanele benze okwabo ukuzimisela futhi bazenzele izinqumo lapho bekhetha umthengisi wokuhweba nge-inthanethi ovumelana nezidingo zabo ngabanye.
Nakuba idatha yethu eminingi iqinisekiswe ngokuqondile yilaba badayisi, ingase ihluke ngezikhathi ezithile. Asinasibopho solwazi olungalungile noma oluphelelwe yisikhathi ekubuyekezweni kwabadayisi bethu abahweba ku-inthanethi futhi kufanele uqinisekise yonke idatha ngqo nomdayisi. Amanani, imigomo, imikhiqizo namasevisi kumawebhusayithi ezinkampani zangaphandle angashintsha ngaphandle kwesaziso.
I-Forexdigital.net eyezinjongo zokwaziswa kuphela futhi ayihloselwe ukusatshalaliswa noma ukusetshenziswa yinoma yimuphi umuntu kunoma yiliphi izwe noma indawo lapho ukusatshalaliswa noma ukusetshenziswa okunjalo kuzongqubuzana nomthetho wendawo noma izimiso. Le webhusayithi ayinikezi iseluleko sokutshala izimali, futhi ayisona isithembiso noma ukucela kwanoma yiluphi uhlobo ukuthenga noma ukuthengisa noma yimiphi imikhiqizo yokutshalwa kwezimali. Singase sinxeshezelwe ngabakhangisi bezinkampani zangaphandle. Lesi sinxephezelo akufanele sibonwe njengokugunyaza noma isincomo yi-forexdigital.net, futhi akufanele sibe nomthelela ezilinganisweni zabathengi bethu.
Ama-CFD, ama-Forex, ama-Cryptocurrencies namanye amathuluzi ezezimali athwala ingozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokushesha ngenxa yenzuzo. Bonke abahlinzeki banamaphesenti amakhulu ama-akhawunti wabatshalizimali abadayiswayo abalahlekelwa yimali lapho behweba ama-CFD namanye amathuluzi ezezimali nezinkampani zabo. Kufanele ucabangele ukuthi uyayiqonda yini indlela ama-CFD, Forex, Cryptocurrencies asebenza ngayo nokuthi ungazifaka engozini yokulahlekelwa yimali yakho. Ungalokothi utshale imali ongeke ukwazi ukuyilahlekela.
Copyright © 2022 - Forexdigital.net Wonke amalungelo agodliwe.
GCINA FUTHI WAMUKELE